Sidee ayuu covid-19 raad ugu yeelanayaa xaaladayda nolosha? | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Bulsho / Wararka / Ku saabsan feyruska cusub ee corona / Sidee ayuu covid-19 raad ugu yeelanayaa xaaladayda nolosha?
Dawladu waxay gaartay go’aamada loo baahanyahay si loo sahlo hawsha ah in la xadeeyo cudur faafinta faayraska cusub ee karoona. Iyagoo wada-shaqayn la leh hey’addaha dawladeed ee ay khuseyso ayay uga shaqaynayaan in laga hortago cawaaqibka cudur faafin ee gudaha bulshada.
Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad la ururiyay oo ka yimi hey'ado dawladeed kuna saabsan sida xaaladaada nolosha uu raad ugu yeelan karo covid-19.
Waxaa jiri kara qawaaniin cusub oo soo baxay iyo xiriirka lala leeyahay hey'addaha dawladeed iminka. Ka warhay macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan faafinta covid-19 iyo sida xaaladaada nolosha ay raad ugu yeelan karto.
Waxaa jiri kara qawaaniin gaar ah oo soo baxa iyo xiriir wakhtiga iminka. Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Xafiiska Shaqada.
Hey’adda Socdaalka waxay iminka eegaysaa dhamaan dhinacyada hawsheeda si loo eego nooca natiijooyinka ay xaalada iminka jirtaa ku yeelan karto dadka raadsanaya magan-gelyho, wax-barta, shaqeeya, booqanaya ama doonaya inay u soo guuraan Iswiidhan. Halkan waxaad ka helaysaa su’aalaha iminka jira iyo jawaabaha ay sabab u tahay faayraska karoona.
Iyadoo ay sabab u tahay faayraska karoona: Bogga intarnatka ee Qasnada Caymiska ka akhri dheeraad ku saabsan nooca qawaaniinta khuseeya gunooyinka lacagta.